Zvipfeko zvisina kujairika zvine majean uye t-shirts kutenderera guta | Bezzia
Zvipfeko zvisina kujairika zvine majean uye t-shirts kutenderera guta
Maria vazquez | 03/05/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Jeans mubatsiri mukuru apo gadzira zvipfeko zvisina kujairika ndezve. Vanenge isu tese tine kanenge kairi kajean muwardrobe yedu, uye pakati peizvi pane nguva dzose paine vaviri vatinotengesa patinenge tichitsvaga kunyaradzwa kwakanyanya.
Nezvo majini anoita kuti unzwe wakasununguka, Pamatanho ese, unogona kudzokorora chero emhando dzemaitiro atinofunga nhasi. Masitaera akakwana emazuva iwayo patinobva pamba tisina kuronga kana kana isu tichiziva kuti tichafanira kufamba chikamu chikuru cheguta.
Uye kana tikataura nezve zvakagadziriswa zvirongwa uye kufamba kwenguva refu, hapana chinowanikwa chingatipe nyaradzo yakakura kupfuura vashoma T-shirts kana shangu dzemitambo. Iye zvino kana isu tatova nehafu yeyedu dhizaini yakagadzirirwa. Zvese zvaunoda kuti uite kusarudza kumusoro kwakakodzera.
Muchirimo a hembe kana t-shirt yekutanga vanova sarudzo huru. Hembe chena ndeyekutanga iyo yatinogona kubatanidza zvese muzvipfeko zvisina kujairika senge zvatiri kugadzira nhasi pamwe nezvimwe zvakajairika. Kana iwe uchibheja pane hembe, zviitire iyo mune chena kana nhema kuti ugadzire zvipfeko zvakapusa zvausingatomboneta nazvo.
Kune iwo anotonhorera mangwanani kana husiku, sarudza a blazer kana pfupi bhachi kukubatsira kurwisa chando. Kana iwe uri kutsvaga zvipfeko zvekutanga kuti ugadzire kutaridzika zvakapusa, gadzira mavara akasiyana pakati pebhachi nehembe kuti uwedzere kufarira kwazviri.
Kanganwa nezve zvipfeko zvekutanga kana iwe uchida kukwevera kutarisa kune chakasarudzika chehembe dzako. Yakadhindwa pamusoro kana ine inoteedzera ruzivo senge hukuru hwakakura makora kana maoko anopenya zvichaita kuti maziso ese atarire pane ino.
Iwe zvakare unowanzo shandisa musanganiswa wejean uye beachwear kugadzira zvakasarudzika zvipfeko?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Zvipfeko zvisina kujairika zvine majean uye t-shirts kutenderera guta
Maitiro ekuchinja yako yekugezera nenzira iri nyore
Dzimwe nzira dzekugadzira bhengi yemuriwo